Shirweyne Arimaha Ammaanka Looga Hadlayo Oo Muqdisho Ka Furmay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Muqdisho(FMN)—Waxaa magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay ka furmay shir ballaadhan oo looga hadlayo arimaha amniga iyo xassilinta guud ahaan dalka Soomaaliya iyo siddii loo dhisi lahaay ciidan soomaaliyeed oo awood uleh hanashada Mas’uuliyada Maamulka iyo maaraynta aeenabadgalyada dalka Soomaaliya.
Shirkan ayay kasoo qeybgaleen Mas’uuliyiin ay kamid yihiin Madaxda Qaranka, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Safiirrada dalalka shisheeye iyo Wakiillada Beesha Caalamka.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane;Maxamed cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’antahay dhismaha ciidan qaran oo tiro iyo tayo ahaanba ku filan in ay amniga kala wareegaan Ciidanka Nabad Ilaalinta Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Previous Previous post: Madaxweyne;Farmaajo Oo Safarkiisii Dibada Kasoo Laabtay.
Next Next post: Cali Cabdalla Saalix oo Cidlo Lagu Dilay.